Xigasho.net U GAAR AH DADKA MASEERKA BADAN :Qaabkee Ayuu Maseerka U Saameeyaa Xiriirka Jaceyl & Sida Aad Iskaga Ilaalinkaro. - Xigasho.net
U GAAR AH DADKA MASEERKA BADAN :Qaabkee Ayuu Maseerka U Saameeyaa Xiriirka Jaceyl & Sida Aad Iskaga Ilaalinkaro.
Dareen ahaan qof walba waxaa uu leeyahay dareen u gaar ah , heerka uu rabo hagaaro , waxaana muhiim ah in mar walba la fiiriyo sida uu dareenkaas loo wajahayo, saameeyn ayuu leeyahay , sidoo kale soo jiidashane waa lagu sameeynkaraa.
Dadka marka ay maqlaan maseer ama hinaaso waxaa kusoo dhacaya xilliga la sameeynayo xiriirka jaceyl , waana meesha ugu badan , maxaa yeelay ma jiro qof aqbalaya in lala wadaago noloshiisa.
Dhaqan ahaan waxaa laga doonayaa qofka inuu iska ilaaliyo caradda badan , sidoo kale waxaa muhiim ah inuu ahaado mid xaddidan.
Goorma Ayuu Hinnaasuhu Dhibaato Leeyahay ?
Hinnaasuhu , waa la taageeraa mararka qaar , balse waxaa la diidayaa inuu noqdo mid dagaal ah , oo dhibaateeya nafsadada , loomana baahna midaas , waxaa si gaar ah looga digayaa dumarka sida xad-dhaafka ah usoo bandhigaan maseerkooda.
Hinnaasuhu waxaa uu leeyahay dhibaato , carro aan xaddidneyn, iyo in qof la dhibaateeyo, waxaana muhiim ah in la iska ilaaliyo.
Qaabkee La Iskaga Xaddidaa Maseerka?
Xilliga uu qofka dareemo in carro xoogan ay heeyso waxaa muhiim ah inuu iska ilaaliyo waxyaabaha maskaxdiisa amreysa tusaale inuu dareemo dagaal , inuu wax dilo iyo sidoo kale inuu noqdo qof dhibane ah.
Xilliga Xiriirka Jaceyl Ma Haboon Yahay?
Haa, waa wax wanaagsan in qofka ku jecel uu kuu maseero , sidoo kale waxaa wax wanaagsan in ruuxa aad ka heshay uu dareenkiisa kuu muujiyo iyadoo aan wax dhibaato ah la dareensiin nafsada